အရောင်ခွဲခြင်းစက်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများဖြင့်ဆန်ကိုစစ်ဆေးပြီးအရောင်ခြားနားချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လေထုတိုတိုဖြင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။. ဒီစက်ကိုဆန်စက်ကြိတ်စက်လုပ်ငန်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအောင်မြင်စွာအသုံးပြုနိုင်ခဲ့တယ်။ ,ဆန်အနက်ရောင်နှင့်အခြားအရောင်ပြောင်းဆန်နှင့်အခြားအတွင်းပိုင်းညစ်ညမ်းမှု. ယနေ့အဆင့်မြင့်အရောင်ခွဲခြင်းစက်သည်ကြံ့ခိုင်သည်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်း,ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပါးပြီးစွမ်းအင်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်. အရောင်အမျိုးအစားခွဲခြင်းသည်အရွယ်ရောက်လာပြီးမည်သည့်ခေတ်မီဆန်စက်၌မဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်.
handpicking နှင့်နှိုင်းယှဉ်, အရောင်ခွဲစက်များသည်ဆန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်သမားနှင့်အချိန်ကိုသက်သာစေသည်, အရာလည်းမြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်နိမ့်အပြောင်းအလဲနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပေး, နှင့်ဖြူဆန်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေ, စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ခွဲထားထုတ်ကုန်များ၏လူမှုရေးအကျိုးခံစားခွင့်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံရိပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များဖန်တီးရန်ကူညီသည်. ဒါ့အပြင်, ဆန်စက်ကြိတ်ခွဲစက်ရုံသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်မပပျောက်စေရန်အရည်အသွေးမြင့်အရောင်ခွဲစက်များကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်လိုအပ်သည်.
အောက်ပါအားသာချက်နှင့်အတူအရောင် sorting စက်
1.အရည်အသွေး - ဒီစက်သည်စားနပ်ရိက္ခာထုတ်ကုန်များတွင်တော်လှန်ရေးအရည်အသွေးရှိသည်. ထုတ်လုပ်သူများသည်ကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးကိုအလွယ်တကူစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီးစျေးကွက်ထဲကိုအလွယ်တကူစတင်နိုင်သည်.
2.ထိန်းချုပ်မှု - ထုတ်လုပ်သူများသည်ငြင်းဆန်ရန်အရောင်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံခြားနားချက်အတိုင်းအတာကိုအလွယ်တကူဆုံးဖြတ်နိုင်သည်. ဤသည်ကသူတို့ကိုထုတ်ကုန်များအပေါ်ထပ်ဆင့်ထိန်းချုပ်မှုပေးသည်, ဥပမာမျိုးစုံကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း.
3.အရည်အသွေး - စက်သည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သောကြောင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုမြန်ဆန်မှုကိုမတားဆီးနိုင်ပါ. အမှန်မှာ၎င်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်သပိတ်မှောက်မှုကဲ့သို့သောလူ့သက်ရောက်မှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်အာမခံချက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်သည်.
4.အလုပ်သမား – အလိုအလျောက်စက်များသည်အလုပ်သမားကုန်ကျမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုလျော့နည်းစေသည်. ထို့အပြင်၎င်းသည်လက်ခံထားသောအမှားအယွင်းကိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိတိုစေပြီးအဓိကအားဖြင့်လူသားတို့၏အမှားများဖြစ်သည်.